Zviwanikwa zvose zviri pa-site ino zvinogona kusabvumidzwa kuburitswa zvakare, kugoverwa, kufambiswa, kuratidzirwa, kudhindiswa kana kutepfenyurwa pasina kutanga wapiwa mvumo, nenzira yechinyorwa, kubva kuNew Life Mission. Haubvumidzwe kushandura kana kubvisa trademark, copyright kana chimwe chiziviso chipi zvacho kubva pamapeji ezviwanikwa.
Asivo, unogona kudhanilodha zvinhu kubva kuNew Life Mission paWeb (one machine readable copy and one print copy per page) kana uchida kuzvishandisa iwe pachako, kana kuti nechinangwa chisiri chekutengesa.
Chirango pamusoro peKushandiswa kweZvinhu zvepaWebsite yedu
Sangano reNew Life Mission rinobvumira kushandiswa kwezvinhu zviri pa-website yaro nechinangwa badzi chekuposita pa-web. Zvimwe zvinangwa zvose, zvakadaro sekugovera kuburikidza nemudhindo, kana kutepfenyura paterevhizheni, kana nemamwe madzimudzangara hazvibvumidzwe.
Kana uchida kuposita zvinhu zvedu pa-website yako, unofanira kubvumirana nezvirango zvebvumirano zvinotevera:
Website iyo inenge ichipositwa zvinhu zvacho haifaniri kuva site inokonzera njodzi uye inopa zvinhu zvisina utano hwakanaka (i.e. , ma-site anoita nezvebonde, zvakadaro semakasi, zvemhirizhonga, kana angava anokurudzira mabasa asiri pamutemo).
Unofanira kutanga wazivisa webmaster wedu (webmaster@bjnewlife.org) ugobva wamupa chidimbu chemusumo we-website yako pamwe ne-URL yezvinhu zvacho zvaunenge uchida kuposita, uya unozofanira kuposita zvinhu izvi mushure badzi mekunge wagamuchira mvumo kubva kuNew Life Mission.
Kodzero yekushandiswa kwezvinhu zvedu inofanira kukumbirwa kubva kwatiri uye igotenderwa nesu pachinhu chega chega, uyevo hatipi mvumo yekodzero yekushandiswa kwezvinhu zvedu kusvika nokusingaperi.
Unogona kusabvumirwa kuposita zvinhu zvedu nenzira iyo inozvishandura, kana kuipisa, kana kukanganisa, kana kufumura, kana kuti nenzira inotuvira kusangano reNew Life Mission.
Haubvumidzwe kuposita zvinhu zvedu kuburikidza nokubvisa, kushandura, kana kugadzurudza zvimwe zvacho.
Unofanira kunyatsojekesa kwatorwa zvinhu zvacho zvaunenge waposita kumucheto kwepositi yacho, seizvi:
Kwazvawanikwa: Sangano reNew Life Mission (www.bjnewlife.org)
Paunenge uchijekesa kwawatora zvinhu zvacho, unofanira kuisa link yechokwadi (http://www.bjnewlife.org).